नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको साधारण शेयर (आइपीओ) काे बाँडफाँड भएकाे छ। आइपीओमा १४ लाख ७५ हजार ८० वटा याेग्य आवेदन रहेकाेमा ६ हजार २ सय ७६ जनाको आवेदन रद्द भएकाे छ।
निफ्राको आइपिओ बाँडफाँड : कसले कति पाए ?
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपिओ तपाईं कति पर्यो ? अर्थ सरोकार डटकममा हेर्नुहोस् नतिजा !
यो साता शेयर कारोबारमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। सातामै दुई दिन आइतबार र बिहिबार सर्वाधिक कारोबारको रेकर्ड बनेको थियो। आइतबार बनेको सर्वाधिक कारोबार रकमको रेकर्ड बिहिबारको कारोबारका क्रममा ब्रेक भएको हो।
सेयर कारोबार रकममा नयाँ रेकर्ड, १० अर्बले बढ्यो कारोबार